कहिले वजारमा आउला चीनको भ्याक्सिन, कति पर्ला मूल्य ? « Pen Nepal
कहिले वजारमा आउला चीनको भ्याक्सिन, कति पर्ला मूल्य ?
Published On : 21 August, 2020 4:29 pm By : पेननेपाल
एजेन्सी । एक चिनियाँ औषधि कम्पनीका प्रमुखले कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन व्यवसायिकरूपमा सन् २०२० को अन्त्यसम्ममा उपलब्ध हुने बताएका छन् । सिनो फर्माका अध्यक्ष लियू जिङ्गजेनले एउटा चीनको कम्युनिष्ट पार्टीको पत्रिकालाई बताएअनुसार यो भ्याक्सिनको मूल्य १ हजार युआन अर्थात १४० अमेरिकी डलर भन्दा कम हुनेछ ।
लियूले भने ‘परीक्षणका क्रममा रहेका दुई भ्याक्सिन छन् । यीनको वार्षिक निर्माण क्षमता २२ करोड खुराक छ ।’ प्रमुख सहरका विद्यार्थी र श्रमिकले भ्याक्सिन प्राप्त गर्ने क्षमता राख्छन् भने ग्रामिण क्षेत्रका वासिन्दाको नहुने उनले जानकारी दिएका छन् ।
यो भ्याक्सिन २८ दिनको फरकमा दुई पटक लगाउनु पर्नेछ । सिनोफर्माका अध्यक्ष, जो आफू कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवसमेत हुन् । उनले आफै पनि यो भ्याक्सिन लगाइसकेको बताएका छन् । कतिपय चिनियाँ अनुसन्धानकर्ता र नेताहरूले पनि भ्याक्सिनको डोज प्राप्त गरेको बताइएको छ । यसमा कतिपयले भने नैतिकताको प्रश्न उठाएका छन् ।